Fametahana bilaogy: SR Coley | Martech Zone
Fametahana bilaogy: SR Coley
Zoma, Jolay 6, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia manokana! Stephen dia sakaizan'i ny zanako lahy, Bill's. Lehilahy mahafinaritra i Stephen - tena manan-tsaina, be te hahafanta-javatra, ary manam-paharetana tsy mampino. Fantatro rehefa nanontany ahy izy fa angamba efa natory tsy natory izy ka tena tiako ny manampy azy.
Ny bilaogin'i Stephen dia tokony ho nahaliana tamin'ny taona ho avy rehefa nankany Alemana izy. Alemana dia fantatra amin'ny azy tsy an'ny bilaogera. Tsy mampivarahontsana izany - ara-kolontsaina fotsiny, ny firenena dia mirona ho ara-tsosialy ivelan'ny haino aman-jery ary tsy miankina ao anaty media sosialy. Izay angamba lesona lehibe tokony hianarin'ny Amerika sy i Azia…… handefa hafatra na handefa mailaka avy amin'ny olona manerana ny efitrano izahay fa tsy handefa azy ireo mailaka!
Stephen, tena tiako ny haben'ny bilaoginao. Madio tokoa ny fomba. Lehilahy mangina ianao fa fantatro fa manana lafiny hafa koa ianao. Hitako amin'ny fanindronana fandrefesana ataonao io ary henonao Converge! Raha nesorinao ny sarinao dia tsy ho azoko an-tsaina mihitsy hoe nanao antsy ireo. Manontany tena aho hoe ahoana no ahafahanao mampiasa an'io mba handravahana ny tranokalanao mba hampahafantaran'ny olona fa manana lafiny tony sy voalamina mialoha ianao ary lafiny mamorona (mikiakiaka?). 🙂
Angamba karazana haingo amin'ny sary lohan-doha? Zahao amin'ny pownce ity sary afara ity:
Mety hisy zavatra toa an'io? any amin'ny toerana maivana any aoriana?
Safidin'ny tena manokana, fa esoriko ny marika Digg. Mety tsara izy ireo, fa manana atody gisa (zerô) ianao sy pejy sy pejy. Mieritreritra aho fa manaisotra ny lahatsoratranao mihoatra ny manampy izany. Angamba azonao atao ny manamboatra ody ary manafina azy amin'ny 0 ary mampiseho azy raha lehibe kokoa noho ny 1 izany? Ny fanehoana filaharana sy statistika dia manome ny mpamaky fahatsapana fa zava-dehibe ny bilaogy na ny lahatsoratra. Fa ny fananana laharana ambany na statistika dia mety hampihemotra ny olona tsy hamaky na hisoratra anarana!
Nolazaiko tamin'ny plugin iray hafa ity plugin ity tipping: Mba hitazomana ny manodidina ny olona dia tiako ny Plugin mifandraika amin'izany ary apetraho eo ambanin'ny tsirairay amin'ireo hafatrao ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany. Amin'izany fomba izany ireo olona mahita anao amin'ny alàlan'ny Search Engine dia hamaky ny lahatsoratranao ary raha tsy hitany izay tena ilainy dia mety hijanona izy ireo amin'ny lahatsoratra fanampiny izay mitovy lohahevitra amin'izany. Hanampy anao koa izany fifandraisana lalina ho an'ny milina Search Engine.
Manavaka ny hafatrao amin'ny sary. Ny sary ao anaty lahatsoratra dia mazàna misarika ny sain'ny mpamaky - indrindra raha misoratra amin'ny alàlan'ny feed izy ireo. Mandalo olana amin'ny fitadiavana sary tsara na clipart tsara ary alefaso amin'ny lahatsoratry ny bilaogy. Hataoko indrindra eo amin'ny hafatra Must Download anao! Ny pikantsary na sary famantarana an'ilay rindrambaiko dia hisarika ny sain'ny olona iray. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny lanjan'ny endritsoratra amin'ny lohatenin'ny bilaoginao mba hiharihary fa mavesatra kokoa. Rehefa mizaha ny pejinao aho dia hitako fa manara-maso ireo lohateny (angamba izaho irery io!)
Oh - ary nahita hadisoana mora nalamina aho - ny rakitra robots.txt anao dia manondro sitemap iray tsy misy. Ny vaovao tsara dia manana sitemap ianao! Ny vaovao ratsy dia mety tsy mandady tsara ny tranokalanao Google raha tsy misy azy io.
Zavatra farany iray… misy zavatra toa tsy misaina ao amin'ilay rohy ao amin'ilay lahatsoratra apetrakao. Indraindray rehefa mandika kaody avy amin'ny HTML ianao dia mikorontana.
Ankafizo, Stephen! Tena tsy maintsy nijery mafy aho ary mitsikera ny tranokalanao. Manao asa mahafinaritra ianao!
Tags: sary afaraColeyDiggPluginLahatsoratra mifandraikarobotsrcoleystephen coley
Fametahana bilaogy: Winextra
Jolay 6, 2007 amin'ny 9:50 PM
Misaotra betsaka Doug! Namboariko tao amin'ny lahatsoratro ny rohy. Nisy ifandraisany tamin'ny mari-tsoratra izany.
Na izany na tsy izany dia tena mankasitraka ny fanakianana nataonao aho. Mety ho voamarikao fa tsy dia nisy votoaty firy tao amin'ny bilaogiko tato ho ato, fa ankehitriny manana an'ireo asa rehetra ireo aho, dia tokony hamerina ahy amin'ny làlana. Mamerina ny fisaorana anao. Tsy ho naniry aho raha ho azon'olon-kafa ny bilaogiko.
Jolay 6, 2007 amin'ny 11:40 PM
Misaotra Stephen! Tena nitsambikina avy teo am-bavahady tamin'ny hafainganam-pandeha tanteraka ianao.